Umqulu webhayisikili, elula futhi esheshayo ukulungiselela, kusiza kahle, uma ufuna ngempela umnandi, uye esitolo sobuvila. Kunezinhlobo zokupheka eziningi kule dessert. Kulesi sihloko, sizokwethula izindlela ezimbili ezithandwa kakhulu.
Senza ama-biscuit rolls elula futhi okusheshayo
Ngokuqinisekile, wonke umsikazi owaziyo uyazi ukuthi i-pie "Charlotte" iphekwe kanjani. Isimiso sokugcoba isisekelo somqulu owenziwe ekhaya sifana. Kuye sidinga izithako ezilandelayo:
Amaqanda amakhulu - ama-4 ama-PC.;
I-Jam apple noma i-pear - ingilazi egcwele (yokugcwalisa);
Ushukela omhlophe - 250 g;
Ufulawa okhanyayo uhlungwa - 250 g;
I-soda, icime nge-vinegar etafuleni - i-dessert spoon;
Amafutha angenaswidi - 10 ml (ngokugcoba isitsha);
Ushukela omanzi - wokuhlobisa i-dessert;
2 mangas - izinkezo ezinkulu.
Ukulungiselela ukuhlolwa kwebhasikili
Lungisa umqulu webhayisikili (elula futhi esheshayo) kufanele uqale ngesisekelo sokuxoxisana. Amaqanda kumele ahlukaniswe ngamaprotheni nezikhupha. Kuyisithako sokugcina udinga ukwengeza ushukela omhlophe bese ugaya amhlophe. Ama-proteine kufanele ahlile futhi ashaywe abe yi-foam ezinzile. Ukuxhuma izixuku ezimbili, kufanele zixutshwe, zengeze kubo i- slaked soda kanye nofulawa osikiwe. Beat the batter kuze kufane futhi airy.
Ngaphambi kokulungiselela umqulu webhayisikili, isisekelo kufanele senziwe kahle ekhasini. Kudingeka uketsheziwe ngaphandle kokunambitheka, futhi ufafazwe nge-semolina. Ekugcineni, yonke inhlama kufanele ithulwe emgqeni wokubhaka ukuze ihlukaniswe ngokulinganayo kuwo wonke ushicilelo.
Kumele kubekwe kangakanani ibhasi lebhayisikili kalula futhi ngokushesha? Ukubeka ishidi eligcwele kunconywa kuphela kuhhavini elivutha kuze kube ngu-205 degrees. Isikhathi sokulungiselela sisekelo sinemizuzu engu-15-17. Kulesi simo, inhlama kufanele ikhule kahle, ibe mnandi, ithambile futhi iluhlaza.
Ukuhamba ekhaya ibhisikidi kuzoba kuhle futhi kuyiphuzo kuphela uma zonke izenzo ezihloswe ekubunjweni kwazo zenziwa ngokushesha kakhulu. Ngemuva kwalokho, ngemuva kokubhaka isisekelo, kuphuthuma kakhulu futhi kuphuka.
Ngakho-ke, ukukhipha ibhisikidi kuhhavini, kufanele ngokushesha ugcobe nge-apula obukhulu noma i-pear jam, bese ugoqa ngokushesha.
Manje uyazi ukuthi ungalungisa kanjani ikhekhe lesiponji ngejamu. Uma isakhiwe, kufanele ibekwe esitokisini esicwebezelayo nesigcwele. Kanciphisa kancane umkhiqizo, kufanele ufafazwe nge-powder futhi ukhishwe etafuleni. Ngaphambi kwalokhu, i-dessert inconywa ukuba ihlukaniswe zibe yizicucu zobukhulu bama-1.7 amasentimitha. Ukuhambisa umqulu webhayisikili ngejamu etafuleni kuyadingeka kanye nenkezo yetiye elimnyama elifudumele.
Silungisa umqulu owenziwe ekhaya nge ubisi oluncibilikile
Uma ulandela yonke imithetho yeresiphi, kufanele uthole umqulu omnandi, omnene futhi otholile. Uma unqume ukwenza i-dessert enjalo hhayi yenkampani yetiyi yomndeni elula, kodwa ukuze uthole ithebula lokugcoba, sincoma ukusebenzisa enye indlela yokulungiselela. Ngalo, ukudla okumnandi okuzokwenziwa kuzoba khona nge-caloric nakakhulu, obucayi futhi obuhlwabusayo.
Ngakho-ke, ake sicabangele ukuthi indlela yokugcoba ibhasikidi yenziwa kanjani isinyathelo ngesinyathelo. Sizoyidinga kuye:
I-milk fatted milk - ijubane eligcwele (1/2 inhlama no-½ ekugcwaliseni);
Ushukela omhlophe - 180 g;
Ufulawa okhanyayo uhlungwa - 290 g;
Ibhotela lebhotela le-fat - 100 g;
Ukhilimu omuncu fresh - 150 g;
Ipowder - yokuhlobisa i-dessert;
Ukugubha ukuhlolwa kwebhayisikili kuyadingeka ukwehlukanisa amaqanda abe yi-squirrels kanye nezikhupha. Ukuze izikhupha kufanele zengezwe ushukela omhlophe, ukhilimu omuncu omusha kanye ne-½ ibhodlela lobisi oluncibilikile. Izithako ezikhuthazayo ziyadingeka kuze kube yilapho unesisindo esimnandi somfaniswano.
Ngokuphathelene nezikhupha, kumelwe bashaywe nge-mixer kuze kube yizintaba eziphikelela. Emva kwalokho, zombili izixuku kufanele zihlanganiswe, zengeze kubo i-slaked soda kanye nofulawa olula. Ekukhiqizeni kufanele uthole inhlama yebhaseji ehambisana nendawo evumayo.
Udaka olubekwe eshidi kanye nokubhaka kwalo
Ukupheka kanjani imiqulu yebhasikili? Ngemuva kokuxuba i-base, i-pan kufanele i-oiled futhi ifafazwe nge-semolina. Esikhathini ishidi kuyadingeka ukuthululela yonke inhlama elungiselelwe futhi uyisakaze ngokucophelela ukuze ukuqina kwayo kuhambisane nendawo yonke. Kule fomu, umkhiqizo ophethwe ngomumo kufanele uthunyelwe kuhhavini. Bhaka inhlama yebhayisikili okungcono ekushiseni kwama-degrees ama-205 ngehora le-¼.
Senza ukhilimu wamafutha
Ukuze ulungise umqulu wokugubha njengokwesikhala, akufanele usebenzise izitshalo ezivuthiwe, kepha ukhilimu wangempela we-dessert eyenziwe ngokwenza. Ukuze wenze lokhu, udinga ukushaya amafutha okupheka omnene ne-mixer, bese ufaka kuwo ubisi olusala olusalayo. Ngenxa yalokho, kufanele uthole i-lush, i-high-calorie kakhulu nekhekhe elihlwabusayo.
Inqubo yokwenza umqulu webhasikili
Ngemuva kokuba inhlama ibhakwa, kufanele isuswe futhi ifakwe kancane ngefosholo ukuze iphume kahle. Ukubheka ubuso bomkhiqizo ngekhilimu elungiselelwe ngaphambilini, kufanele ngokushesha uhlanganiswe ngombhalo oqinile. Ukuze uqiniseke ukuthi awuvuli, kufanele ubeke endaweni ephepheni nge-cut cut down.
Uma imiqulu ipholile kancane, kutuswa ukuba ufafaze i-powder, ikhava ngefilimu bese ufakwa esiqandisini. Kuleli fomu, i-dessert kufanele igcinwe ihora lonke. Phakathi nalesi sikhathi, ibhisikidi ithatha ingxenye yama-cream ayisiliva, iba mkhulu futhi ilula.
Ungakhonza kanjani etafuleni?
Ngemva kokuba uqhube ibhayiseti egumbini eliqandisayo, kufanele lisuswe futhi lifakwe kwi-tartar. Sika le dessert zibe yizicucu ngobukhulu bama-1.7-2 amasentimitha, kufanele unikezwe izivakashi ngekende letiyi elimnyama. Ukunambitha lokhu kunambitheka akuphansi kwekhekhe elizenzela. Ngesikhathi esifanayo, kuyashesha futhi kulula.
Ungazihlobisa kanjani umqulu?
Ukukhipha ibhisikidi emizuzwini emihlanu kungahlotshwa ngezindlela ezahlukene. Ngenhla sanikeza indlela elula futhi esheshayo (ukufafaza noshukela oluyimpuphu). Kodwa uma ufuna ukumangaza izivakashi zakho futhi uthole i-dessert enhle kakhulu, kuzomele usebenzise ezinye izindlela. Isibonelo, abanye abesifazana bathela umqulu oqediwe nge- chocolate glaze noma udwebe kuwo umshini ongavamile. Ukuze wenze lokhu, ithreyili emnyama noma emhlophe yezitolo zokudla ezidliwayo iyancibilika ekushiseni okuphansi ngokufaka izinkezo ezimbalwa zobisi kanye no-5 g webhotela.
Ngaphezu kwalokho, i-dessert enjalo ingafakwa ukhilimu ohlutshiwe, ukhilimu omuncu noma i-protein cream. Futhi, ama-biscuit rolls kufanele ahlotshwe kahle ngezingcezu zezithelo (ubhanana, ama-apula, i-mandarin, i-orange, i-kiwi, amagilebhisi) noma amajikijolo amasha (ama-strawberries, ama-strawberries, i-cowberry, ama-blueberries, ama-raspberries, ama -berberries, njll).
Umhluzi wenkomo - isisekelo se-borscht, isobho nezinye izitsha
Yidla ebhodweni namazambane kanye nemifino
Iresiphi yama-wickets ase-Karelian: silungiselela i-patties ngesi-Finnish
Yini enquma okuqukethwe kwama-kilojoule inyama